Satoshi Nakamoto – Bitcoin, ब्लक दल
the founder of Bitcoin and creator of unique Bitcoin client, यस गुप्त उद्योग गर्न सबैभन्दा ठूलो योगदान गरेका छन् जो सबैभन्दा प्रभावशाली मान्छे को सूची पूर्वसूचना. क्वार्ट्ज को हाल मूल्यांकन अन्तर्गत, आजकल Satoshi Nakamoto हुन सक्छन् 980,000 गर्न 1 लाख bitcoins. डिसेम्बर मा, Bitcoin गरेको अज्ञात निर्माता हुनेथियो $19.4 अरब वा दुनिया मा 44th अमीर व्यक्ति भएको. Bitcoin एक वैश्विक मुद्रा बन्न गर्छ भने, Satoshi Nakamoto शायद दुनिया मा wealthiest मानिस हुनेछ. तर Satoshi Nakamoto को pseudonym अन्तर्गत जो लुकिरहेका छ अझै पनि ज्ञात छैन.
के हामी थाह छ कि सेतो कागज छ “Bitcoin: एक साथीहरूको-सहकर्मी इलेक्ट्रनिक नगद प्रणाली” अक्टोबर मा Satoshi Nakamoto को pseudonym अन्तर्गत प्रकाशित भएको थियो 31, 2008. यो सेतो कागज इलेक्ट्रोनिक नगद को पूर्ण decentralized सिस्टम वर्णन, जो कुनै पनि तेस्रो पक्ष आवश्यक छैन. को P2P फाउंडेशन को वेबसाइट मा प्रोफाइल Satoshi Nakamoto जापान एक 42 वर्षीया नागरिक हो भनेर भन्छन्, र bitcoin.org गर्न लिङ्क प्रदान गर्दछ. अन्तमा 2010, Satoshi उहाँले सामना गर्न छोडेर थियो घोषणा “अझ महत्त्वपूर्ण कुराहरू।” तब देखि Satoshi Nakamoto तर्फबाट कुनै गतिविधि थियो. यो विश्वसनीय छलफल सक्ने सबै जानकारी छ; बाँकी अनुमान र guesswork छ.
निक Szabo – क्रिप्टोग्राफी, Cryptocurrencies, स्मार्ट सम्झौता
isafamous cryptography specialist andaresearcher in theoretical computer science. यो पहिलो अवधारणा शुरू जसले थियो “स्मार्ट सम्झौता ” मा 1996, जो तेस्रो पार्टीहरूलाई resorting बिना साझेदारी सम्पत्ति अनुमति दिन्छ. मा 1998, Szabo एक decentralized डिजिटल मुद्रा को लागि एक संयन्त्र डिजाइन र यसलाई “बिट सुन।” यो गुप्त बजार धेरै सहभागीहरू उहाँलाई Satoshi Nakamoto विचार भनेर आश्चर्य छैन.
Szabo SegWit2x आफ्नो विरोध घोषणा, जो Bitcoin नेटवर्क अन्तिम शरद ऋतु मा आयोजित गर्न थियो. उहाँले Bitcoin नेटवर्क को कठिन बिभाजनमा वर्णन, Bitcoin नगद, रूपमा “केंद्रीकृत sock puppetry।”
पछिल्लो नोभेम्बर, Szabo र एक शोधकर्ता ऐलेन Ou रेडियो संकेत भन्दा Bitcoin लेनदेन पठाउने एक काम विधि शुरू. यो विधि फायरवाल को संभावित आक्रमणबाट नेटवर्क रक्षा गर्न बाटो रूपमा सैन मा सिलिङ Bitcoin सम्मेलन मा शुरू भएको थियो, नेटवर्क gateways, वा अमेरिका वा दूरसञ्चार कम्पनीहरु द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर decentralized नेटवर्क नियन्त्रण गर्न अन्य तरिका.
रोजर हेर्नुहोस् – Bitcoin.com
ज्यादातर पहिलो Bitcoin करोडपति को रूपमा जानिन्छ, a.k.a. Bitcoin येशूले, Ver रूपमा प्रारम्भिक रूप मा Bitcoin लगानी गर्न थाले पछि जो आश्चर्यजनक छैन 2011. यो Ver पनि गुप्त संसारको स्तरअनुसार धेरै असाधारण मान्छे हो कि टिप्पण लायक छ. मा 1999, अध्ययन एक वर्ष पछि, उहाँले व्यक्तिगत व्यापार सञ्चालन पक्षमा डी Anza कलेज बाहिर गिरा. मा 2005, उहाँले firecrackers बिक्रीको लागि जेलमा दस महिना सुनाइसकेको थियो (संयुक्त राज्य अमेरिका मा अवैध) eBay मा. मा 2006, रोजर जापान सारियो र अमेरिकी नागरिकता renounced. मा 2012, उहाँले एक गैर लाभ संगठन को संस्थापक मध्ये एक भए, Bitcoin फाउंडेशन, कि "मानकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ, रक्षा, र विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताहरूको फाइदाको लागि Bitcoin क्रिप्टोग्राफिक पैसा प्रयोग बढाउँछ। "आजकल Ver cryptocurrency पर्स सेवा शुल्क छ, Bitcoin.com
गत वर्ष भन्दा बढी, रोजर Ver को नाम बारम्बार कारण नयाँ cryptocurrency को परिचय मिडिया मा देखा, Bitcoin नगद, जसमा उनले धेरै अब समर्थन. आफ्नो राय अनुसार, Bitcoin नगद एक “साँचो Bitcoin” कि Satoshi Nakamoto को मान समर्थन.
शीर्षक लागि दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय उम्मेदवार छ “साँचो” Satoshi Nakamoto. मा 2011, उहाँले पहिलो altcoins को एक विकास, Litecoin, जो Bitcoin नेटवर्क मा काँटा को फलस्वरूप देखा. मान्छे Litecoin हुन सक्छ कि अडकलहरु हो “Bitcoin गरेको सुन चांदी।” मा 2013, ली अप कोइनबेस मा प्राविधिक निर्देशक को स्थिति लिए, एक प्रमुख cryptocurrency मंच. तर मा 2017, उहाँले Litecoin पदोन्नति ध्यान केन्द्रित गर्न कम्पनी छोड्ने निर्णय.
वर्ष भन्दा बढी, को cryptocurrency दर भन्दा बढी दस पटक गरेर वृद्धि, र आज मा खडा $255. डिसेम्बर मा, चार्ली ली कसैले मूल्य उतार चढाव प्रभावित उहाँलाई दोष सकून् भनेर उहाँले आफ्नो सबै Litecoins बेचिएको थियो घोषणा. उहाँले परियोजना छोड्न लाग्नुभएको थियो कि छैन र यो काम गर्न सबै आफ्नो समय समर्पित जारी थियो जोड.
एक Bitcoin व्यापारी र निवेशक र पूर्व-उपाध्यक्ष जेपी मर्गन मा Chase-छ तरिकाले गुप्त समुदायमा ज्ञात. Weiss देखि जनता गर्न प्रविधि प्रचार पहिलो blockchain प्रचारकहरू मध्ये एक मानिन्छ गरिएको छ 2013. उहाँले एक सफल ब्लग छ, पोडकास्ट, युट्युब च्यानल, र अधिक 80,000 Twitter मा अनुयायीहरूलाई. CoinTelegraph अक्सर आफ्नो टिप्पणी र सामाग्री प्रकाशित. यसबाहेक, मा 2014, Weiss BraveNewCoin मा अनुसन्धान को हेड भयो.
को Weiss अनुसार’ पछिल्लो सेप्टेम्बर मा प्रकाशित भएको थियो र Bitcoin प्रयोगकर्ताहरूको घाताङ्कीय वृद्धि आधारित छ कि अनुसन्धान, अन्त द्वारा 2018, Bitcoin मूल्य पनि पार गर्न सम्भावित छ $100,000 मार्क. पहिले, Weiss बताए, अन्त द्वारा 2017, Bitcoin क्रूसमा थियो $15,000 मार्क, जुन हामीले डिसेम्बर पालन गरे 17. Weiss खुल्लमखुल्ला को IČO मार्फत रकम हुर्काउन को आधुनिक तंत्र criticizes, रूपमा 90% IČO को परियोजनाहरू छन् “सिर्फ प्रचार।”
सबै भन्दा ठूलो cryptocurrency परियोजनाहरूको एक को सह-संस्थापक, Ethereum, र यसको मूल cryptocurrency, अर्थात् ईथर. मा 2013, Buterin cryptocurrency सेतो कागज प्रकाशित blockchain मा निर्मित, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले धेरै अद्वितीय अवसर तिनीहरूलाई प्रदान स्मार्ट अनुबंध प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
वर्ष को सुरुदेखि, को ईथर दर वृद्धि 57 पटक, र Buterin अमेरिकी फोर्ब्स को दर्जा सामेल “30 30 अन्तर्गत।” ब्लूमबर्ग को सूचीमा Buterin समावेश 50 सबैभन्दा प्रभावशाली मान्छे 2017, र रूसी फोर्ब्स को सूचीमा उहाँलाई समावेश 100 यस शताब्दीको सबैभन्दा प्रभावशाली रूस.
गत वर्ष, Buterin को सेन्ट समयमा राष्ट्रपति पुटिन संग जो भेट केहि उद्यमीहरू एक भए. पीटर्सबर्ग आर्थिक फोरम. कुराकानीमा विवरण प्रकट छैन, तर यो बैठक पछि, रूसी अधिकारीहरु blockchain प्रविधि र cryptocurrencies मा यू-टर्न गरे, blockchain एक रोचक प्रविधि ध्यान लायकको कल. यसबाहेक, यो Ethereum Vnesheconombank संग एक संयुक्त परियोजना सुरु गर्न जाँदै थियो ज्ञात भयो (WEBSITE); Sberbank अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना उद्यम Ethereum गठबंधन सामेल (EEE), जो पहिले नै बढी समावेश 200 कम्पनीहरु, र EEA मा पहिलो रूसी बैंक भयो.
Gavin काठ – समता टेक्नोलजी, पोल्का डट
को Ethereum मा सह-संस्थापक र पूर्व CTO छ, जसले प्रारम्भिक Ethereum सेतो कागज एक वास्तवमा चलिरहेको कार्यक्रम मा Buterin द्वारा लिखित कायापलट. अब काठ कम्पनी समता टेक्नोलजी पूर्वसूचना, जो blockchain सञ्जालका लागि सफ्टवेयर विकास. उहाँले पनि सुरुवातमा Polkadot को सह-संस्थापक, जो निजी र सार्वजनिक blockchains एक ठूलो अनुकूलताको लागि नेटवर्क scalability सुधार गर्न अनुमति दिन्छ कि प्रोटोकल विकास.
को 2017 वर्ष काठ लागि कठिन साबित. वर्ष को सुरुमा, कम्पनी सफलतापूर्वक समता जारी 1.5, एउटा अद्यावधिक Ethereum नेटवर्क ग्राहक. तर राम्रो सुरुवात पछि, वर्ष को बीचमा, समता टेक्नोलजी गंभीर कठिनाइ सामना.
पछिल्लो जुलाई, को पर्स ह्याक थिए. को ह्याकरहरूलाई multisignature संग सम्झौता मा बग फेला पर्यो, जो तिनीहरूलाई चोर्न अनुमति 153,000 ethers (बारेमा $32 लाख समयमा). समता यो समस्या समाधान गर्न स्मार्ट सम्झौता एउटा अद्यावधिक संस्करण जारी. तैपनि, अर्को महत्वपूर्ण बग, जो पर्स तर्क प्रबन्धन कि पुस्तकालयमा बस्नुहुन्छ, नोभेम्बर पत्ता लागेन. а प्रोग्रामर गरेको गल्ती को फलस्वरूप, वरिपरि $152 लाख समता प्रयोगकर्ता मा स्थिर थियो’ खाता.
काठ अनुसार, सबै प्रयोगकर्ता’ मञ्चमा भण्डारण डिजिटल सम्पत्ति पूर्ण सुरक्षित छन्, तर टी अहिलेसम्म सम्भव नेटवर्क तिनीहरूलाई पुल गर्ने छ. यसलाई स्थिर सम्पत्ति बीचमा थियो टिप्पण लायक छ $98 लाख एक IČO मार्फत Polkadot सुरुवातमा द्वारा उठाइएका.
Satoshi Nakamoto को नाम पछि वास्तवमा जो सबैभन्दा लोकप्रिय संस्करण निम्न छन्:
निक Szabo - एक वैज्ञानिक कम्प्युटर विज्ञान को क्षेत्र मा, क्रिप्टोग्राफी, र व्यवस्था, स्मार्ट अनुबंध र cryptocurrency को साथै एक शोधकर्ता.
चार्ली ली - Litecoin को निर्माता.
नील राजा, व्लादिमीर Oksman, र चार्ल्स BRY - पेटेंट आवेदन लेखक, भनिन्छ “अपडेट गर्ने र गुप्तिकरण कुञ्जीमा वितरण।”
माइकल Klare - डबलिन को कलेज मा क्रिप्टोग्राफी को एक स्नातक.
डोराएन Nakamoto - संयुक्त राज्य अमेरिका को एक नागरिक (क्यालिफोर्निया) जापानी मूलका.
क्रेग राइट - एक अष्ट्रेलियन व्यवसायी.
Elon Musk - एक प्रसिद्ध अरबपति, Tesla र स्पेस एक्स टाउको, र SolarCity मा बोर्ड को एक सदस्य
ती सबै, बाहेक क्रेग राइट, अस्वीकार पहिलो cryptocurrency स्वामित्वको आफ्नो. सायद, किनभने Nakamoto धारण यो गुप्त बजार को लागि समाचार को एक उत्कृष्ट टुक्रा छ 5% सबै bitcoins को. त्यसैले, Nakamoto, यदि चाहेको, एकदम को Bitcoin दर र गुप्त बजार असर गर्न सक्छ.
सह-संस्थापक Fundstrat: Bitcoin खर्च हुनेछ $ 25,000, अमेजन र फेसबुक को blockchain सिन्धुघाटीका सामेल हुनेछ ...
एक फेब्रुअरी 28 प्रतिनिधिलाई ...
Europ मा भिषा आउटएज ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार9जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 10 जनवरी 2018